၂၀၂၁ ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက်အတွင်း လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ K-drama ဇာတ်​ကောင်များ | Asia News Bar
၂၀၂၁ ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက်အတွင်း လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ K-drama ဇာတ်​ကောင်များ
The most popular K-drama characters in the first half of 2021
မကြာ​သေးခင်အချိန်က K-Pop နဲ့ K-drama သတင်း​တွေကို တင်ဆက်​ပေး​နေတဲ့ Kpopmap ဝက်ဘ်ဆိုက်က​နေ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက်အတွင်း ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲ​တွေထဲက ပရိသတ်​တွေ အနှစ်သက်ဆုံး မင်းသားနဲ့ မင်းသမီးဇာတ်​ကောင်​တွေကို မဲ​ပေး​ရွေးချယ်​စေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီမဲရလဒ်အရ ထိပ်ဆုံးမှာ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ ​ယောကျ်ား​လေးဇာတ်​ကောင် ၃ ခုနဲ့ မိန်းက​လေးဇာတ်​ကောင် ၃ ခုက​တော့
1. Lee SuHo (ASTRO’s Cha EunWoo) – “True Beauty”
“True Beauty” ထဲက ဆူဟိုဇာတ်​ကောင်ဟာ ပရိသတ်​တော်​တော်များများရဲ့ နှလုံးသားကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့ပြီး ဒါ​ကြောင့်လည်း Kpopmap စာဖတ်သူ​တွေဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက်အတွင်း သူတို့ သ​ဘောအကျဆုံး ​ယောကျ်ား​လေးဇာတ်​ဆောင်အဖြစ် ​ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဆူဟိုဟာ ရုပ်​ချောပြီး ဉာဏ်​ကောင်းတဲ့အပြင် စိတ်​​ကောင်းလည်း ရှိ​တော့ သူ့ကို သ​ဘောမကျတဲ့သူမရှိတာ မဆန်းပါဘူး။ ကြည့်ရှုသူ​တွေဟာ Suho တစ်​ယောက် အချစ်နဲ့ စ​တွေ့ချိန်မှာ ဖြစ်​ပေါ်လာတဲ့ ချစ်စဖွယ်အပြုအမူတွေကို နှစ်သက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ အပိုင်း​တွေများလာတာနဲ့အမျှ ဆူဟိုဟာ လူတိုင်းရဲ့ စိတ်ကူးထဲက ချစ်သူ​ကောင်​လေးပုံစံဖြစ်မှန်း သိသာလာပါတယ်။ သူဟာ Ju Gyeong အ​ပေါ်ကို အား​ပေးခြင်း၊ ဂရုစိုက်ခြင်း၊ စိတ်ရင်းနဲ့ဆက်ဆံခြင်း၊ ချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းစတာ​တွေ အကုန်လုပ်​ပေးတဲ့ ချစ်သူ​ကောင်းတစ်​ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
2. Jung Ba Reum (Lee SeungGi) – “Mouse”
မှုခင်းသည်းထိတ်ရင်ဖို ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်တဲ့ “Mouse” ထဲက Jung Ba Reum က​တော့ ဒုတိယ​နေရာကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ခက်ခဲပင်ပန်းတဲ့ ဘဝမှာ ​နေထိုင်ခဲ့ရပြီး စိတ်​ကောင်းရှိတဲ့ ရဲအရာရှိတစ်​ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ သူတစ်ပါးကို ကူညီဖို့အတွက် အမြဲအဆင်သင့်ဖြစ်​နေတတ်ပြီး တိရစ္ဆာန်​လေး​တွေကို​တောင်မှ သူ့အသက်ကိုရင်းပြီး ကာကွယ်​စောင့်​ရှောက်တတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ Jung Ba Reum ဟာ နိုင်ငံ့သား​ကောင်းဆုကိုလည် ရရှိထားပြီး ​နောက်ပိုင်း သူ့ရဲ့ဇာတ်​ကောင်မှာ အလှည့်အ​ပြောင်းများစွာနဲ့ မတူညီတဲ့ ဆွဲ​ဆောင်မှုကို ​တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
3. Ki Seon Gyeom (Im SiWan) – “Run On”
တတိယ​နေရာကို ရရှိခဲ့တဲ့က​တော့ “Run On” ဇာတ်လမ်းထဲမှာ Im Si Wan သရုပ်​ဆောင်ထားတဲ့ Seon Gyeom ဆိုတဲ့ ဇာတ်​ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ​မွေးဖွားလာတဲ့ အားကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ဖခင်နဲ့ မတည့်ပါဘူး။ သူဟာ ထူးခြားတဲ့နည်းနဲ့ ​တွေး​ခေါ်ကြံဆတတ်ပြီး ချစ်စရာ​ကောင်းပါတယ်။
စစချင်းကြည့်ရင်​တော့ သူ့ကို ထူးဆန်းတဲ့သူတစ်​ယောက်လို့ ထင်​ကောင်းထင်နိုင်​ပေမဲ့ သူဟာ စိတ်ရင်း​ကောင်းပြီး အဆုံးမရှိတဲ့ ဆွဲ​ဆောင်မှု​တွေနဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွဲကြည့်ရင်း သူ့အခန်း​ရောက်တဲ့အခါ မပြုံးမိတဲ့သူ မရှိ​လောက်​အောင်ပါပဲ။
1. Lim JuGyeong (Moon GaYoung) – “True Beauty”
မိန်းက​လေးဇာတ်​ကောင်​တွေထဲမှာ ပထမ​နေရာကို ရရှိခဲ့တာက​တော့ “True Beauty” ထဲက Ju Gyeong ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ရည်မှန်းချက် ကြီးကြီးမားမားမရှိပဲ သွက်လက်တက်ကြွတဲ့ အထက်တန်း​ကျောင်းသူဖြစ်ပြီး ​ရုပ်ဆိုးဆိုး​ကောင်မ​လေးဖြစ်ပါတယ်။ ​နောက်ပိုင်း မိတ်ကပ်ပြင်နည်း​တွေကို ကြည့်ရင်း မိတ်ကပ်လိမ်းနည်းကို ကြိုးစားသင်ယူကာ ​​သူမ​ကျောင်း​ပြောင်းသွားတဲ့ ​ကျောင်းအသစ်မှာ အလှဘုရင်မဖြစ်လာပါ​တော့တယ်။
Ju Gyeong ဟာ ရှပ်ပြာပြာနဲ့ တလွဲ​တွေလုပ်တတ်ပြီး မထင်မှတ်ထားတဲ့ အ​ခြေအ​နေ​တွေနဲ့ ကြည့်ရှုသူ​တွေကို ရယ်​မော​စေခဲ့တဲ့အတွက် ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲ​တွေရဲ့ ​ခေါင်း​ဆောင်မင်းသမီး ဇာတ်​ကောင်​​တွေထဲမှာ လူကြိုက်အများဆုံးအဖြစ်ဇာတ်​ကောင်တစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်​နေပါတယ်။
2. Oh MiJoo (Shin SeKyung) – “Run On”
“Run On” ထဲက Mi Joo ဇာတ်​ကောင်က​တော့ ဒုတိယ​နေရာကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Mi Joo ဟာ ထက်မြက်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဘာသာပြန်ဖြစ်ပြီး အလုပ်ကြိုးစားသူဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အလုပ်နဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံအတွက်ဆို စိတ်အားထက်သန်စွာ အလုပ်လုပ်တတ်သူဖြစ်ပါတယ်။
ထိုဇာတ်ကားထဲက နာမည်ကြီးစာသားတစ်ခုက​တော့ “တခြားသူ​တွေထက် ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မ တန်ဖိုးထားတယ်” ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်​တွေဟာ ဒီလိုထက်မြက်တဲ့ သူမရဲ့ ဆွဲ​ဆောင်မှုမှာ ​ကြွေကျသွားပုံပါပဲ။
3. Princess Pyeong Gang (Kim SoHyun) – “River Where the Moon Rises”
ရည်မှန်းချက်ကြီးမားတဲ့ မင်းသမီး Pyeong Gang က​တော့ တတိယ​နေရာကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာတဲ့ မိန်းက​လေးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်စဉ်က သူမရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ လုပ်ကြံခံလိုက်ရတာကို ​တွေ့မြင်ခဲ့ပြီး​နောက် လက်စားပြန်​​ချေဖို့နဲ့ သူမရဲ့ တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်ဖို့စတဲ့ ရည်မှန်းချက်​တွေကို အ​ကောင်အထည်​ဖော်ဖို့ အခက်အခဲ​တွေကြားက​နေ ရုန်းကန်ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။ သူမဟာ တိုက်ရည်ခိုက်ရည်​​ကောင်းသူဖြစ်သလို နည်းဗျူဟာနဲ့ နိုင်ငံ​ရေးကစားကွက်​တွေကိုလည်း ကျွမ်းကျင်ပါတယ်။
Next မြန်မာမလေး Su Nadi Soe ပါတဲ့ Kpop အဖွဲ့ Rumble G ရဲ့ သီချင်းအသစ် ထွက်ရှိတော့မှာဖြစ် »
Previous « “Taekook” ဆိုပြီး နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ Trending ဝင်သွားရတဲ့အဖြစ်အပျက်
Lee Jong Suk နဲ့ Yoona တို့ကို တွဲဖက်မြင်တွေ့ရမယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲသစ်အကြောင်း
ASTRO Moon Bin နဲ့ SF9 Hwi Young တို့ပါဝင်မယ့် The Mermaid Prince
Joseon Exorcist နဲ့ Snow Drop ကို ကန့်ကွက်ဖို့ အသနားခံစာ​တွေအတွက် အိမ်ပြာ​တော်ရဲ့ တုံ့ပြန်ချက်က..
“School 2021” လူငယ်ကျောင်းသားဇာတ်လမ်းတွဲတွင် ပါဝင်ရိုက်ကူးမည့် အနုပညာရှင်များနှင့် ထွက်ရှိမည့်နေ့
“True Beauty” ဇာတ်ကားမှာ အထူးဧည့်သည်သရုပ်ဆောင်အဖြစ် ပါဝင်လာမယ့် Kim Young Dae